Tag: dhacay | Sagal Radio Services
Faah faahin ka soo baxaya dagaal culus oo ka dhacay degmada Qoryooley
Sagal Radio Services • News Report • December 28, 2015
Faah faahin ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo u dhaxeeyay ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab oo shalay gelinkii dambe ka dhacay degmada Qoryooley ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Xiisad dagaal oo ka dhex taagan labada Kuuriya, markii madaafiic is dhaafsadeen
Sagal Radio Services • News Report • August 21, 2015
Xiisad dagaal ayaa ka dhex taagan dalalka Koofurta Kuuriya iyo Waqooyi Kuuriya, kuwaasoo aan in muddo ahba xiriirkooda wanaagsaneyn, iyadoo maalintii shalay ciidamada labadaas dal ay tiro madaafiic ah isku dhaafsadeen xuduuda.
Dagaallo u dhexeeya Ciidanka dowlada, AMISOM iyo xoogagga Axmed Daaci
Sagal Radio Services • News Report • August 15, 2014
Ugu yaraan 10-qof oo shacab iyo askar isugu jirta ayaa ku dhintay tiro intaas ka badanna dhaawacyo ayaa kasoo gaaray dagaal culus oo xalay illaa saakay ku dhexmaraya degmada Wadajir ciidammo ka tirsan kuwa dowladda oo gacan ka helaya AMISOM iyo xoogag taabacsan guddoomiyihii hore ee degmada Wadajir, Axmed Xasan Caddoow (Axmed Daaci).
Kooxo hubeysan oo Saraakiil ka tirsanaa Nabad-sugidda ku Toogtay Muqdisho
Kooxo hubeysan oo watay gaari yar ayaa saaka ku toogtay degmada Xamar-jajab ee gobolka Banaadir sarkaal iyo askari ka tirsanaa ha’yadda nabad-sugidda Qaranka Soomaaliyeed, iyagoo dhaawacay laba askari oo kale.
Masuul katirsanaa Maamulka Degmada Dharkeenley oo Maanta lagu dilay Magaalada Muqdisho
Kooxo hubeysan ayaa goor dhow toogasho ku dilay mas’uul ka tirsanaa maamulka degmada Dharkeynley ee gobolka Banaadir sida ay sheegayaan warar hadda na soo gaaray.
Haweeney Toogatay Ninkeeda oo u shaqeynayay Dowladda Somalia
Haweeney ayaa toogasho ku dishay saaka aroortii hore seygeeda oo u shaqeynayay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya.
Mid ka mid ah mutadawiciinta tallaalka cudurka dabaysha oo lagu dilay Muqdisho
Mid ka mid ah haweenka sida mutadawiciinta ah ugaga howlgala magaalada Muqdisho barnaamijyada tallaalka cudurka dabaysha ayaa kooxo hubeysan ay ku dileen degmada Wardhiigley ee magaalada Muqdisho.
Qarax Xoogan oo goor dhaw ka Dhacay Madaxtooyada Soomaaliya
Sagal Radio Services • News Report • February 21, 2014
Muqdish–knn-- Qarax Culus ayaa Goor dhaw ka dhacay Dhabarka Danbe ee xaruunta Madaxtooyada Soomaaliya waxaana aan la ogeen ,Qaraxa waxaa uu ahaa iyo Cida lala eegtay intaba.
Haweeney Caan ah oo xalay kooxo Hubeesan ku dileen Magaalada Muqdisho
Kooxo Hubeesan aan heebtooda la garan ayaa Habeenkii xalay Isgooska SOS ee Degmada Hiliwaa waxa ay ku dileen Haweeey halkaasi caan ka aheed in mudo ahna jaad ku iibin jirtay Isgooska SOS.
Qarax Miino oo kolonyo ka tirsan AMISOM lagula eegtay duleedka Muqdisho
Wararka ka imaanaya deegaanka Garasbaaley ee duleedka Muqdisho ayaa sheegaya in mid ka mid ah gaadiidka AMISOM oo Kolonyo ahaa qarax miino lala eegtay, iyadoo gaariga uu soo gaaray qasaare.
Masuul Ka Tirsan Maamulka Gobolka Banaadir oo Muqdisho Lagu Qaarijiyay
Warar aanu heleyno ayaa sheegaya in kooxo hubeysan ay xalay ku dileen degmada Heliwaaee gobolka Banaadir madaxii caafimaadka maamulka degmadaasi.
Sagal Radio Services • News Report • February 7, 2014
Wiil dhallinyaro ah oo arday ahaa ayaa xalay lagu diley magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Dilka wiilkan ayaa waxaa geystey askari ka tirsan ciidamada booliska ee degmada Baydhabo.
Faa faahin dheeri ah ayaa ka soo baxeyso Qaraxa ka dhacay Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • December 27, 2013
Ugu yaraan 12 Ruux ayaa ku Geeriyooday Qaraxii Duhurkii ka dhacay agagaarka Kuliyada Jaalle Siyaad ee Magaalada Muqdisho.
Ilaa afar ruux ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay Gaari Bas oo marayay Xaafada Islii (Sawirro)
Ilaa afar ruux ayaa ku dhimatay qarax ka dhex dhacay bas gudihiis oo marayay nawaaxiga Saldhiga Booliska Pangani, Xaafada Islii ee magaalada Nairobi.
Dagaal u dhaxeeyo Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo Xoogagga Al-shabaab ayaa ka dhacay Degmada Huriwaa ee Gobolka Banaadir
Sagal Radio Services • News Report • December 4, 2013
Ugu yaraan laba ruux ayaa ku dhintay tiro intaas ka bandanna way ku dhaawacmeen iska-horimaad culus oo xalay ku dhexmaray degmada Huriwaa ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Al-shabaab.